Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » Nwunye obi ụtọ: Australia bụ obodo ọhụrụ kacha aṅụbiga mmanya ókè
Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Entertainment • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Mmanya & mmuo
Ihe karịrị mmadụ 32,000 sitere na mba 22 dị iche iche gburugburu ụwa kpughere ọkwa nke ọgwụ na mmanya ha na nyocha Global Drug Survey 2021.
Dị ka nnyocha mba ụwa na-eme kwa afọ banyere iji ọgwụ eme ihe, ndị Australia na-azaghachi na-aṅụ mmanya mmanya ruo n'ókè nke enweghị uche ihe karịrị ugboro abụọ n'ọnwa (ihe dị ka ugboro 27 n'afọ) ebe nkezi nke ụwa dị ihe dị ka ugboro 14, ma ọ bụ ntakịrị ihe karịrị otu ugboro n'ọnwa.
The Nnyocha ọgwụ zuru ụwa ọnụ 2021 kọwara ịṅụbiga mmanya ókè dị ka ọnọdụ ebe ikike anụ ahụ na nke uche na-emebi emebi ruo n'ókè nke na-emetụta nguzozi, ilekwasị anya, na okwu.
Dabere na nsonaazụ akụkọ a, a na-akpọ ndị Australia aha ndị kasị aṅụ mmanya n'ụwa, ebe Denmark na Finland kekọtara n'ọnọdụ nke abụọ, ebe ndị zara ajụjụ sitere na mba ọ bụla kwuru na ha na-aṅụbiga mmanya ókè ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ugboro abụọ n'ọnwa n'afọ gara aga.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị na-aza ajụjụ na Australia nwere ịkwa ụta maka àgwà ịṅụ mmanya, ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ atọ n'ime ụzọ anọ nke ndị si Down Under na-akọ na enweghị obi ụtọ na ha "na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ngwa ngwa."
Otú ọ dị, ndị Irish na-aṅụ mmanya na-enwe mmetụta kasị njọ n'ịghara ịṅụbiga mmanya ókè, ebe ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ "chọrọ na [ha] aṅụrula ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ na ha aṅụghị mmanya ma ọlị."
Ndị na-aṅụ mmanya Australia jikọtara ya na ndị na-aza ajụjụ Finnish n'elu ndepụta ahụ mgbe a bịara n'ịchọ ọgwụgwọ ahụike mberede maka ọnọdụ "dị njọ" metụtara mmanya. Ọnụego nke ịchọ nlekọta ahụike na mba abụọ ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ nke nkezi zuru ụwa ọnụ, na-etinye nrụgide gbakwunyere na sistemu ahụike ọha COVID kụrụ.
Ndị nyocha nyocha kwuru na ndị mmadụ nọ Australia "weere biya" n'oge ọrịa COVID-19 ebe ọ bụ na ọtụtụ mpaghara gbanarị mkpọchi a na-ahụ anya na mba ndị ọzọ n'afọ gara aga.
Ndị ọzọ na-abụghị Victoria, ọtụtụ steeti na ókèala nwere naanị mkpọchi dị mkpụmkpụ ma dị nkọ, nke mere ka ebe ọbịa na-emeghe yana ọtụtụ ihe omume ga-eme.